Nhau - Chigadzirwa Chitsva kuburitswa - Rechargeable bhatiri fan 9 inch
Mazuvano electrics limited situation yakaitika, kwete kuChina chete, asiwo kune dzimwe nyika uye nepasi rese, magetsi ari kushomeka. isu (Kennede Electronics MFG CO LTD)
Yedu New Model KN-L2819, 9 inch Rechargeable bhatiri fan, ine 7.4V3600mAh Lithium bhatiri, ine 3 kumhanya kwesarudzo yako, otomatiki kuruboshwe uye kurudyi 40 ° kuzunza musoro basa, nyore kushandiswa kwemhuri. Uye mwenje wehusiku une 12pcs LED, yakanakira mucheche uye vabereki vanoshandisa.
Chimiro chechigadzirwa Chitsva ichi:
4 IN 1 Ine Simba Mhepo Inotenderera Fani: Kusiyana nemafeni echinyakare, kusimudzira turbo Tekinoroji inoita kuti inotonhorera feni igadzire mhepo inotenderera inotenderera mhepo mukamuri rese. Haisi chete fan, asiwo mwenje ine mwenje we LED. Iwe unogona zvakare kuishandisa sechiedza chehusiku. Iyo dhesiki fan ine 3 inogadziriswa mhepo. Hapana chikonzero chekugara pedyo nefeni kuti ugare uchitonhorera, mhepo inotonhorera inoita kuti unzwe wakasununguka mukona yega yega yekamuri. Zvakare inogona kuiswa madziro mukicheni yako.
Ultra Quiet Fan yeKamuri yekurara: Nekuyerera kwemhepo kwepamusoro, iyi compact tafura fan inogona kuzadzisa zvese zvaunoda. Inofambiswa neDC tekinoroji, iyo feni yemagetsi yakanyarara uye inoshanda kutonhorera chinyararire mukamuri kuti ugone kurara zvakanaka. Ruzha rwakadzikira kusvika pa25dB, zvakaenzana nerukova runobhuya kana kuzevezerana zvinyoro nyoro zvichiita kuti ive yakanakira imba yekurara, makamuri evana nemahofisi. Iyi fan yakanyarara yakanakira kurara zvishoma, vanhu vakuru nevana, rega iwe uve nehope dzakanaka.
DC Tekinoroji & Kushanda Kwesimba: Uyu fani akanyarara ane simba guru! Iyi dhesiki fan inosarudza yakanyanya advanced DC mota ine mabhenefiti ari pachena anoshanda nesimba, akanyarara uye akareba sevhisi hupenyu. Kushandiswa kwesimba kunongova 3-24W, izvi zvinoreva chete 1 kWh inodiwa kwemaawa mazana matatu nemakumi matatu ekushandisa nguva dzose (zvishoma zvigadziriso), izvo zvinogona kuchengetedza 80% yemagetsi kana ichienzaniswa neAC mota mafeni! Kunze kwezvo, shandisa iyi inotonhorera fan ine air conditioner, ichawedzera 80% kushanda zvakanaka kweair conditioner!
Yese Kamuri Circulator Fan: Iine 3D oscillation function, iyi feni inotenderedza inogona kupenengura 80 ° yakatwasuka (otomatiki) uye 120 ° yakatwasuka (manual), inopa kutenderera kwakazara kwemhepo yese mukamuri, ine simba rekutonhodza vanhu mukamuri ye30m². Unique huni tsanga, nyore streamline dhizaini. Zviri nyore kuparadzanisa uye kuchenesa. Isu tiri brand yakananga-kutengesa mutengesi, zvinonyatsopindura meseji yako mumaawa makumi maviri nemana, hupenyu hwese hushamwari hwesevhisi yevatengi uye rutsigiro.
Nguva yekutumira: Oct-12-2021